Fromlinux ရှိသုံးစွဲသူ၏အဆင့်အရအရောင်များကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်မှတ်ချက်များ Linux မှ
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | GNU / Linux များ, NOTICIAS, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ငါတို့သူငယ်ချင်းရဲ့အချိန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟူဂို (မကြာခင်ငါတို့နှင့်အတူသူတို့အသိပညာကိုပေးလိမ့်မည်ဟုငါမျှော်လင့်ပါတယ်), ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိအသုံးပြုနေသောအခင်းအကျင်း၏ကုဒ်၏အစိတ်အပိုင်းကိုပြုပြင်ခဲ့သည် <linux မှသည်°, မှတ်ချက်များသည်ဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်အသုံးပြုသူအဆင့်အလိုက်ကွဲပြားသောအရောင်များကိုပြသနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်ပေးသူသည်ဆောင်းပါး၏ဖန်တီးသူဖြစ်လျှင် magenta highlighting ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်ပေးသူသည်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ် ဦး ဖြစ်ပါကအနီရောင်မီးမောင်းထိုးပြခြင်း။
မှတ်ချက်ပေးသူသည်စာရင်းပေးသွင်းသူသို့မဟုတ်ကြည့်ရှုသူ (default) ဖြစ်ပါကမီးမောင်းထိုးပြခြင်းမရှိပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Desdelinux ရှိအသုံးပြုသူအဆင့်အရအရောင်များကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်မှတ်ချက်များ
50 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
မင်း fuck ဆိုတဲ့နောက်မျက်နှာဖုံးပုံရှိတယ်မဟုတ်လား။ ကြည့်ပါ ဦး၊
ဟားဟား! ညံ့ဖျင်းသောရဲစွမ်းသတ္တိ! XD
အပြင်အရောင်နောက်ပြန်ဖြစ်ပါသည်, ထို post ၏စာရေးသူ pandev92 ဖြစ်ပါသည်, ငါ့ကိုမ
ရဲရင့်ပါတယ် အယူအဆမှာစာမူ၏စာရေးသူသည်အစိမ်းရောင်ဖြင့်ပေါ်လာလိမ့်မည်၊ သို့သော်ဘလော့ဂ်အသုံးပြုသည့်အကြောင်းအရာသည်တင်းပလိတ်ပြောင်းလဲမှုကိုထောက်ခံရန်မထင်ရ၊ ယခုမူစာရေးသူအားလုံးသည်အစိမ်းရောင်သာဖြစ်သည်။ ငါအဖြေတစ်ခုရှာလျှင်တွေ့လိမ့်မယ် (Windows မှရေးသားခြင်းအတွက်လူတိုင်းအတွက်တောင်းပန်ပါ)
ထို့နောက်သူသည်အစိမ်း၊ အဝါရောင်ကိုမကြိုက်၊ သို့မဟုတ်လိမ္မော်ရောင်က Ubuntu ကိုသတိရလျှင် LOL !!!
ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ တကယ်ပဲ ... မင်းတို့ဒီမှာဒီမှာမကြာခဏလာဖို့ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ မင်းတို့လုပ်ပေးတာတွေထက်အများကြီးအများကြီးရှိတယ်။
အရောင်ကသူကိုအခွံချွတ်သည်။ အရိပ်သည်အရိပ်ဖြစ်သည်။ ငါနည်းနည်းလေးပေါ့အောင်လုပ်သင့်သည်။
ပူးပေါင်းသူသည်အဝါရောင်ဖြင့်ပေါ်နေသည်။ ၎င်းသည် Linux မှအမှန်တကယ်အချိန်တွင်အလုပ်လုပ်သည်၊ ၎င်းသည် post ကိုဖန်တီးပြီးနောက်ပြောင်းလဲမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
cache နှင့် cookies များကိုရှင်းလင်းရန်ကြိုးစားပါ
သင် css update လုပ်ရန်သို့မဟုတ်တစ်ခုခုတစ်ခုခုစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်လည်းထိုအရာကိုမမြင်ရပါ။ သူတို့ကလူနည်းစုနှင့်ခေတ်နောက်ကျသော browser ကိုသုံးရန်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ခွာသွားမည်ဟုထင်မြင်ခဲ့သည်။ P.
ရယ်စရာကတော့ငါ UserAgent ကနေပြောင်းပြီးအလုပ်လုပ်ပုံရတယ်။ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါက UserAgent ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။
elav <Linux ကို° ဟုသူကပြောသည်
Hahaha မကောင်းတဲ့စိတ်ကူး .. မကောင်းတဲ့ရဲရင့် !! သတ္တုခေါင်းနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယများကြောင့်လူမည်းသည်သူနှင့်သင့်တော်သော်လည်း ...
elav <Linux ကိုမှတုံ့ပြန်ပါ
A ခွေးရူး Ubuntu နှင့် Uncle Mark အကြောင်းမကောင်းသောစကားများသည့်အခါတိုင်းအရောင်အမျိုးမျိုးကိုအရောင်တင်မည့်အစားသူတို့သည်သူ၏“ အပြုသဘောဆောင်သော” နှင့်ရယ်စရာဝေဖန်မှုများ (! # #%% & / ((=)) XD XD XD
ဒါဟာသင်ကိုယ်တိုင်သူငယ်ချင်းမဟုတ်ဘူး။ ငါတို့အားလုံးမင်းကိုနည်းနည်းလောက်ချစ်ကြတယ် know
အဆိုပါ filter များ hahaha မီးတောက်မှကျေးဇူးတော်ပယ်ရှား
HAHAHA ၏အကြံဥာဏ်ကောင်း ... Courage "Winbuntu" ကိုရေးတိုင်းအချိန်တိုင်း၎င်းသည် "ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောညှင်းဆဲခြင်းကို" သို့ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဟားဟား!!!
တည်းဖြတ်သူများသည်အရောင်ပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်သာမန်လူများ၏အရောင်ဖြစ်သောပုံမှန်အရောင် (အဖြူမဟုတ်ပါ) ဖြစ်သည်။
စာဖတ်ခြင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အရိပ်သည်ပိုမိုပေါ့ပါးသည် (သို့မဟုတ်ဘောင်မပါဘဲ) မပါဘဲဖြစ်စေလိမ့်မည်။
ပို့စ်ရေးသားသူရဲ့အခန်းကဏ္ofကိုမခွဲခြားဘဲကွဲပြားခြားနားတဲ့အရောင်ရှိသည့်ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းတစ်ခုကိုအဲဗာကိုပို့လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုဖော်ထုတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသင့်သည်။ သင် login လုပ်သည်ဖြစ်စေမဝင်သည်ဖြစ်စေ၎င်းကိုပြရန်ကြိုးစားပါ။ ၎င်းအတွက်သင်အသုံးပြုသူနှင့်တူသော email address ကိုအသုံးပြုရမည်။
ငါအချို့စမ်းသပ်မှုလုပ်နေတယ်သော်လည်းသူတို့သည်အလွန်ပေါ့ပါးလျှင်သူတို့တစ်နည်းနည်းရှုပ်ထွေးရပေမယ့်အရောင်များကိုအနည်းငယ်ပေါ့စေနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါ tonality ၏အဆင့်အကြံပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးအရောင်များမဟုတ်ပါ၊ ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်များက၎င်းတို့ကိုပြောင်းလဲရန်၊ မပြောင်းမည်ကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအားဖြင့်သာကူညီခဲ့သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် elav သည်ဆုံးရှုံးမှုအနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။ 😉
အတိအကျ ဒါဟာသူတို့တစ်တွေနေ့၏သင်တန်းကာလအတွင်းသူတို့မှတ်ချက်များအတွက်ထူးဆန်းတဲ့အရာမြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်ကိုသူတို့သိသည်ကောင်းသောဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဆေးလိပ်သောက်သောပီပီကြောင့်မဟုတ်ဘဲဘီယာများကသူ့ကိုနာကျင်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပူပြင်းစွာလုပ်ဆောင်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည် (Real Time) .. 😛
ဟုတ်ကဲ့။ Hugo သည်ပြင်ဆင်ချက်အသစ်များကိုကျွန်ုပ်မပို့မချင်းကျွန်ုပ်😀
ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝေဖန်သူများသာလိုအပ်သည်။ တုံ့ပြန်ချက် need
ငါကပြီးပြီ, အရိပ်နှင့်အတူတ ဦး တည်း, အခြားဘာမျှမ, မဟုတ်ရင်ကအဆင်ပြေပါတယ်
သေချာတာပေါ့၊ သူ၌ရှိသောအရာမှာဆင်းရဲသား၌သူ၏နှစ်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ၎င်းသည် reggaeton နှင့်သူအကြားပျောက်ဆုံးသွားခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်
မင်းသာသိရင် .. ငါဒီ blog ထဲမှာအသက်အကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူး .. ¬¬
ထိုအခါငါစမ်းသပ်မှတ်ချက်ခွင့်ရှိသည်! * _ *
ငါဗီဒီယိုတစ်ခုတင်မည်! (ငါသင်တန်းတက်တာ _ _ * ပဲ)
KdenLive ဖြင့်တည်းဖြတ်သည်။ XDDDDDDD (ငါကအရမ်းဆိုးတဲ့တည်းဖြတ်သူပါ။ )
ဆိုလိုတာက site ဖန်တီးသူ၊ အဓိကအကြောင်းအရာဖန်တီးသူ၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတာတွေ၊ ဒါပေမယ့်စာရေးသူ၊ အယ်ဒီတာ၊ ပူးပေါင်းသူ၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခြင်းစတာတွေဟာဘာအကြောင်းလဲဆိုတာအတိအကျမသိရဘူး။ ငါပြောတာကအရောင်များ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအရာဝတ္ထုများကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်သောအခါခွဲခြားသိရန်ဖြစ်သည်။
PS: ငါပုံထဲမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်အထူးပါပဲ!! xD ။
- Troll Anti-Troll သန့်ရှင်းရေးအကူအညီ (ALA)ဖြေ - ရဲစွမ်းသတ္တိမရှိဘူးဆိုတာသေချာအောင်၊ သူပြောသမျှကိုတည်းဖြတ်ပြီးပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုနဲ့အစားထိုးဖို့တာ ၀ န်ရှိသူတစ်ယောက်ယောက်ရှိလိမ့်မယ်။ ဤရာထူးကို Self-suffuff Advanced Script (SAA) ဖြင့်ဖြည့်နိုင်သည်။
- Occult Possessed Samurai (SOP)ဖြေ။ ။ သူဟာ Katana နဲ့စတင်တာကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကမှတ်ချက်ပေးလေ့မရှိပါဘူး။ (ဒါကငါ့အတွက်မသက်ရောက်ပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအားမပေးလို့ပါ) 😛
- Soul Slayer Ninja: (ဘာမှမ) ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးမှာအလွန်ရက်စက်သောကြောင့်မည်သည့်အသုံးပြုသူကိုမှဆိုက်အတွက်မသင့်တော်ဟုယူဆစေလိမ့်မည်။ ဤရာထူးကိုအသုံးပြုသူများ၊ IP, ISP နှင့် ICANN ကိုအသုံးပြုသူများကိုကန့်သတ်ခြင်း၊ ဆင်ဆာပြုလုပ်ခြင်း၊ ပိတ်ပင်ခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းနှင့်ဖယ်ထုတ်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သော SOPA အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး မှဖြည့်စွက်ရမည်။
PS: ငါအကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုစလုပ်ရမယ်ထင်တယ် .. uff
- Ninja Soul Killer: (ဘာမှမ) ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးမှာသူသည်ရက်စက်။ အလွန်အသုံးမကျသောကြောင့်မည်သည့်အသုံးပြုသူကိုမှ site အတွက်မသင့်တော်ဟုမှတ်ယူလိမ့်မည်။ ဤရာထူးကိုအသုံးပြုသူများ၊ IP, ISP နှင့် ICANN ကိုအသုံးပြုသူများကိုကန့်သတ်ခြင်း၊ ဆင်ဆာပြုလုပ်ခြင်း၊ ပိတ်ပင်ခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းနှင့်ဖယ်ထုတ်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သော SOPA အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး မှဖြည့်စွက်ရမည်။
လူးကပ်စ Matias ဟုသူကပြောသည်
လူးကပ်စ Matias ကိုပြန်ကြားပါ
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါရန်လိုခြင်းကြောင်းဖိုရမ်အတွက် BOFH ခေါင်းစဉ်ကိုအသုံးပြုသောအချို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအလွန်စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုမထင်ကြဘူး။
ဟေ့! BOFH ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာလူအများမသိဘူးဆိုတာသေချာပေမယ့်လည်းအဲဒီလိုပဲ
HAHA ရန်လိုအနီရောင်? ... လုံးဝမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုလုံးဝအနက်ရောင် ထား၍ CSS ကိုတည်းဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်ချက်တစ်ခုချင်းစီတွင်အရောင်များပြောင်းလဲခြင်းသာမကအမှတ်တံဆိပ်၊ သင်္ကေတတစ်ခုလည်းပါသည့်သေးငယ်သည့် gif တစ်ခုကို၎င်း၏ထောင့်တွင်နေရာချနိုင်သည် (ဥပမာ - ညာဘက်ထောင့်) သို့မဟုတ်တစ်ခုခု ... နှင့်နေဆဲကရန်လိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ^ _ ^
သင်မှန်သောမိတ်ဆွေဖြစ်သည်၊ ရန်လိုမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ပူစရာမလိုပါ။ အနည်းဆုံးတော့အလွန်အမင်းမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများ၊ မကြာခဏစာဖတ်သူများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် hahahahaha ထက် ပို၍ ရန်လို (trolls) ဖြစ်နိုင်သည်။
မင်းကိုအနှောင့်အယှက်ပေးတာက fuchsia၊ မိန်းကလေးတွေအတွက်ပဲ
ရဲရင့်ပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဝတ်ရုံကိုဝတ်ဆင်ပါ။ ဘာလို့အရောင်လေးကိုဘာကြောင့်ဂရုစိုက်ရတာလဲ။
ငါက Avatar အကြောင်းရှင်းပြပြီးပြီ။ Dofu $ မှာငါကောက်ခဲ့တဲ့ထုံးစံတစ်ခု ပိုပြီးများစွာသောလူလိုပဲ.
Intel 82945G / GZ နှင့် Kernel 3.x တို့ဖြင့်စာလုံးပုံပျက်ပုံကိုပြုပြင်ပါ
Ubuntu TV: TV အတွက် Linux